ओलीले बनाए एमालेका १८ पदाधिकारीको सूची, क–कसको नाम अटायो? - ramechhapkhabar.com
ओलीले बनाए एमालेका १८ पदाधिकारीको सूची, क–कसको नाम अटायो?
नेकपा एमालेको चितवनमा जारी १०औं महाधिवेशनको बन्द सत्रबाट नयाँ नेतृत्व छान्ने अधिकार पाएसँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षबाहेकका १८ पदाधिकारीको सूची तयार पारेका छन्। उनले अध्यक्ष आफै रहने अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी भीम रावललाई उपाध्यक्ष बनाउने गरी १८ पदाधिकारीको सूची तयार पारेका हुन्।
तर, उक्त सूचीप्रति स्वयम् ओली पक्षधर नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ओली निकटका नेता विष्णु पौडेल र सुवास चन्द्र नेम्वाङ, महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटालगायत नेताहरूको असन्तुष्टिकै कारण ओलीले आफूले तयार पारेको सूची सार्वजनिक नगरेको एक नेताले बताएका छन्।
आफू निकट नेताहरूले नै असन्तुष्टि जनाएपछि ओली अप्ठेरोमा परेका छन्। नेताहरूको असन्तुष्टिका कारण सूची सार्वजनिक गर्न नसकेका ओलीले नजिकका केही नेताहरूसँग छलफल गरेर नामहरू थपघट गर्ने तयारी गरेका छन्। आज पदाधिकारीको नाम टुंगो लगाउने एमालेको तयारी छ। नेपाल समय